यो एक महिला एक बच्चा भालु गर्दा एक समयमा, उनको शरीर थप तनाव उजागर छ ज्ञात छ। उहाँले मात्र आफु, तर बढ्दो बच्चा को पनि रक्षा हुनुपर्छ। त्यसैले, यो expectant आमा, आफ्नो स्वास्थ्य, पोषण पछि हेर्न भनेर बाहिर पर्याप्त समय खर्च र मौसमी भाइरल रोग आफूलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण छ।
तर कहिले काँही, सबै सावधानीहरु बावजुद, एक गर्भवती महिला एक चिसो पकड र बिरामी प्राप्त गर्न सक्छन्। यो बिन्दुमा, यो जोडले प्रश्न उठ्छ अघि, के उपचार सर्दी र कसरी त्यस्तो खोकी, दुखेको घाँटी, ज्वरो वा रूघाँ रूपमा लक्षण उन्मुक्ति छ। साधारण चिसो, सबै कुरा को स्पष्ट लक्षण स्पष्ट छ र तपाईं तुरुन्त आफ्नो डाक्टर सम्पर्क गर्नुपर्छ भने, तपाईं एक्लै साधारण चिसो कुरा गर्नुपर्छ।
गर्भावस्था को समयमा रूघाँ
रूघाँ सबैका लागि समस्या धेरै दिन्छ। र यो expectant आमा को लागि एक प्रकोप हुन सक्छ। तपाईं एक रूघाँ अनिवार्य छ व्यवहार गर्न आवश्यक छ कि सम्झना। आखिर, यो महिला को लागि मात्र होइन तर भ्रूण लागि समस्या सिर्जना गर्छ। निस्सन्देह, तुरुन्तै जस्तै साधारण चिसो लागि naftizin घटेको वा अन्य vasodilators रूपमा मदत कि लागूपदार्थ, आपत्ति गर्न आउँछ। तर यो भविष्यमा बच्चा हानी हुनेछ कि गर्भावस्था को समयमा naftizin लागू गर्न सम्भव यो छ?
यो मुद्दा मा, सहमति अझै पनि कुनै छ। प्रत्येक मामलामा यो कारणले चिसो छ के थाहा महत्त्वपूर्ण छ। यो सर्दी को एक परिणाम हो? वास्तवमा, धेरै महिना एकदम अक्सर गर्भवती महिला अवलोकन गर्न सकिन्छ गर्भावस्था, समयमा rhinitis शरीर को हर्मोन परिवर्तन कारण हुन्छ र बढ्दो भ्रूण त्यसको प्रतिक्रिया छ। यसबाहेक, नाक बाधा एक एलर्जी प्रतिक्रिया कारण हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई विकासशील र गर्भमा बढ्दो बच्चा लागि हानिकारक naftizin, यो सामान्य चिसो को घटना को प्रकृति बुझ्न आवश्यक छ कि छैन भनेर सोच अघि, धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
के भ्रूण खतरनाक rhinitis?
सामान्यतया, यो रूघाँ यस्तो सर्दी वा एलर्जी रूपमा आसन्न खतरा, को जीव यस्तो चेतावनी दिन्छ जो एउटा संकेत हो। त्यसैले, यस्तो rhinitis विकासशील भ्रूण ठूलो खतरा छ। प्रारम्भिक गर्भावस्था मा, रूघाँ एक भाइरल मूल गर्भपतन, अर्थात् रूपमा सेवा गर्न सक्छ जो गर्भाशय मा रगत, मार्फत प्राप्त गर्न सक्षम, भइरहेको गर्भपात। को कारण नाक बाधा गर्भावस्था को 8 सप्ताह गर्न, भ्रूण को गठन असर र गम्भीर रोग हुन सक्छ।
नाक भीड आमा को, बच्चा पर्याप्त अक्सिजन आपूर्ति हुनेछ किनभने गर्भावस्था rhinitis को पछि चरणमा खतरनाक छ। यो एक ढिलाइ गराउँछ intrauterine वृद्धि मंदता, को र ostavanie भ्रूण वजन।
म गर्भावस्था को समयमा naftizin प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
यसलाई व्यावसायिक सल्लाह बिना घरमा रूघाँ लोक तरिकामा व्यवहार गर्न vasodilator लागूपदार्थ प्रयोग र गर्न Resort छैन भन्दा राम्रो छ। आखिर, कुनै पनि, दुवै राष्ट्रिय र दबाइ एक बच्चा लागि सुरक्षित नहुन सक्छ।
रगत जो भ्रूण hypoxia नेतृत्व गर्न सक्छन् placenta सहित, शरीर मा बर्तन को रगत र कारण साँघुरो मा प्राप्त naftizin खस्छ। निस्सन्देह, विशेषज्ञहरु को राय यो मुद्दा मा विभाजित छन्। केही सल्लाह गर्भावस्था को समयमा naftizin प्रयोग गर्न, र नुनखरा मात्र rhinitis को उपचार को लागि प्रयोग गर्नुहोस्, र नुन रचनाहरूको। यी धन कुनै पनि लागूपदार्थको समावेश र चिकित्सा घर उपचार को एक एनालग छ छैन।
अन्य डाक्टर मान्छे बख्शते विधिहरू मदत छैन भने, रूघाँ भाइरल मूल को छ भने गर्भावस्था को समयमा naftizin प्रयोग गर्न अनुमति छन्, तर केवल अन्तिम उपायको रूपमा।
लागू naftizina अन्तर्गत गर्भवती महिला यो PERIODICITY पालन गर्न र कडाई सूचित औषधिको खुराक पालना आवश्यक छ। यो तपाईं3भन्दा बढी लगातार दिन को एक थोपा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भन्ने याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ। एक रूघाँ सुत्न गर्न expectant आमा र भ्रूण हस्तक्षेप गर्दैन, केवल ओछ्यानमा जानुअघि नाक मा मुर्दा गाड्नु naftizin सुझाव दिन्छौं।
एलर्जी rhinitis naftizina व्यवहार गर्न निषेधित छ र कुनै पनि अन्य vasodilators नाक लागि खस्छ।
सारांश, हामी गर्भावस्था को समयमा त्यो naftizin प्रयोग मनमोहक छैन, तर यदि एउटा जरुरी आवश्यकता छ, यो गम्भीर नाक भीड बच्चाको चिन्ता गर्नाले मात्र चिसो को शिखर, मा यसको प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ भन्न सकिन्छ।
महिला मानव papillomavirus
गर्भावस्था मा Chicory
गर्भपात पछि गर्भावस्था: स्थिति को एक दोहोरिने कसरी रोक्न?
2 वर्ष को केटी कसरी वरदान चयन गर्न के दिन?
सार्वजनिक सम्बन्ध को उदाहरण। प्रणाली र सार्वजनिक सम्बन्ध को स्कोप
नरम खिलौने र चरण fotoinstruktsii को ढाँचाहरू
Aquamarine - जस्तै समुद्र छालहरू देखि 'बुना' एक पत्थर
कसरी पट लागि सोध्न बच्चा सिकाउन? हामी चाँडै र चुपचाप यो गर्न
UAZ 390945 "किसान" - घरेलू उत्पादन को सबै पहिया ड्राइव हाइब्रिड
अभिनेता इल्या रटबर्ग: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन (फोटो)
मिनी फलाम: मोडेल, रूपको समीक्षा। फलाम रोड तह
जंगली सुनगाभा - एक सुन्दर केटी qui-मई को प्राण को embodiment